निर्मला बलात्कारपछिकाे हत्या प्रकरणमा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले गरे यस्तो खुलाशा – PathivaraOnline
Home > समाज > निर्मला बलात्कारपछिकाे हत्या प्रकरणमा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले गरे यस्तो खुलाशा
निर्मला बलात्कारपछिकाे हत्या प्रकरणमा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले गरे यस्तो खुलाशा
admin September 14, 2018 समाज	0
काठमाण्डाै २९ भाद्र । बलात्कार सँसारभरमै एक अति संवेदनशील विषय हो। यस्ता विषयमा प्रहरीले हदैसम्मको संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी गम्भीर नबन्दा अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ। फलस्वरूप घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोस्टमा छ।
कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीकै संलग्नतालाई लिएर अनेक आशंका उब्जिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई नै कारबाही गर्ने तालुक निकाय प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर ऊ पनि मूक बसिदिएपछि घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा आक्रोशसमेत बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, निलम्बनमा परेका प्रहरीलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको पाइएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा भएका बलात्कारकै विभिन्न घटनाले पनि यस्तो पुष्टि गरेका छन्।
एक वर्षअघि दरबारमार्गमा एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार भयो। उक्त घटनामा ढाकछोपका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई केही दिन निलम्बन गरियो। तत्कालीन दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी तिलक भारतीलाई सरुवा पनि गरियो। प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी निलम्बनमा परे। ठकुरीले पैसा लिने सर्तमा उक्त घटना मिलाएको तत्कालीन प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर ठकुरी अहिले चितवनमा कार्यरत छन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका भारती बर्दियाको इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरमा इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन्।
यी दुई घटनाले प्रहरीका कमजोरी उजागर गरेका छन्। सँगै निर्मला हत्या आरोपमा प्रहरीले कञ्चनपुरका दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गर्‍यो। विष्टको बानीव्यहोरा र पृष्ठभूमिलाई मात्रै प्रमाण बनाएर सीआईबी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी नेतृत्वसँग सोधपुछ पनि गरे। जवाफमा प्रहरी नेतृत्वले ‘विष्ट आरोपी हुन्, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि उसले नै घटना गराएको हो’ भनेर रिपोर्टिङ गरे। विष्टलाई प्रहरीले अनेक यातना पनि दियो। तर परीक्षणमा विष्टको डीएनए मिलेन। यससँगै उनी रिहा भए।
अझै पनि कञ्चनपुर घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा अनेक आशंका उब्जिएकै छन्। यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘दोषी देखिएको अवस्थामा प्रहरी जहिल्यै कारबाहीमा पर्छन्। निलम्बन भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। अनुसन्धानले उसको पूर्ण मिलेमतो नदेखिएपछि निलम्बित फुकुवा हुन्छन्।’ निलम्बनमा पर्दैमा प्रहरीको जागिर जाने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ। निलम्बनमा परेकालाई प्रहरीको नियमावलीअनुसार ग्रेड घटुवा, नसियत दिने, दर्जा घटाइनेलगायत आन्तरिक कारबाही हुँदै आएको उनले बताए।
घटना भइसकेपछि अनुसन्धानका लागि विभिन्न पाटो केलाउनुपर्छ। घटना यसैले गरायो भनेर यकिन नहुँदा शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्नैपर्छ। सोधपुछका लागि ल्याइएका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि अदालतबाट म्याद लिनैपर्‍यो। गैरन्यायिक थुनामा राख्न पाइएन। अनुसन्धान र तथ्यले मेल खाएन भने शंकास्पद भनिएका व्यक्ति पनि छुट्छन्। विष्ट पक्राउ प्रकरण पनि त्यही एउटा कडी हो। डीएनए परीक्षणका लागि उनलाई काठमाडौं झिकाइयो। उनको डीएनए मिलेन। र उनी छुटे। यसमा प्रहरीको फसाउने नियत कहाँ देखिन्छ ?
घटनामा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराजको कमीकमजोरी भएकै हो। उनले पन्त हत्याको घटनालाई गम्भीर ढंगले नलिएकै हुन्। त्यसैले सीआईबीबाट टोली पठाएका हौं। म आफैं पनि घटनाबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगें। बुझ्दा त्यहाँ खटिएका प्रहरी संवेदनशील नभएकै पाएँ।
पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संगठनकै कर्मचारी संलग्न भएको पाइए उनीहरूलाई बर्खास्त गर्छु। यो घटना गुपचुप राख्ने व्यक्ति पनि छानबिनको दायरमा आउँछन्। तर एउटा व्यक्ति संवेदनशील नभएको घटनालाई लिएर समग्र संगठनलाई मुछ्नु उचित होइन। प्रहरी सधैं गम्भीर छ। सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। १२ वर्ष पुरानो रानीबारी हत्याकाण्ड पनि प्रहरीले नै पत्ता लगाएको हो। यसलाई पनि त भुल्नुभएन नि।
‘कि न्याय देऊ, नभए गोली’, दुर्गादेवी पन्त, निर्मलाकी आमा
हामी काठमाडौं आएका छौं। सरकारले ५० दिनसम्म पनि कुनै हत्यारा पत्ता लगाएको छैन। प्रधानमन्त्री पनि यहीँ हुनुहुन्छ। न्याय दिलाउने राज्य यहीँ छ। राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ। यो घटनामा उहाँले सोच्नुपर्ने हो। उहाँ पनि आमा हुनुहुन्छ। अहिले मेरी छोरी मारिइन्। त्यो ठाउँमा उहाँ (राष्ट्रपति)की छोरी भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो उहाँले सोचेर न्याय दिलाइदिनुस्।
न्याय नपाई घर फर्कनु कसरी ? दुई छोरी घरमै छाडेर आएकी छु। न्याय दिलाउनुस्। झुलाएर नफर्काउनुस्। होइन भने मलाई पनि गोली हानेर मारिदिनुस्।
प्रहरीले नाटक गर्‍यो, यज्ञराज पन्त, निर्मलाका बुवा
साउन ९ गते रोशनी बम घर आइन्। निर्मलालाई बहिनी जसरी पनि आऊ, अम्बा पाकेका छन् भनेर उनले बोलाइन्। त्यसपछि निर्मला गएकी हुन्। तर उनी साँझ ६ बजेसम्म आइनन्। बमको बाहिर चारैतिर पर्खाल लगाएको घर थियो। हामी सोध्न गयौं। तर निर्मला घर फर्किसकिन् भनेर हामीलाई पठाइयो। त्यत्तिकैमा हामीलाई उल्टै ‘तेरी छोरी पोइला गएपछि हामीलाई के सोध्छौ ? ’ भनेर हप्काए।
प्रहरीलाई सोही दिन राति साढे आठ बजे खबर गर्‍यौं। गड्डाचौकीमा माइती नेपालमा पनि सूचना दियौं। तर वडा प्रहरी कार्यालयले अहिले हामी जान सक्दैनौं भने। ती केटी (बम दिदीबहिनी) बद्नाम भएका केटी हुन्। अहिले जान सक्दैनौं भने। त्यहाँ नभएपछि सालघारी चौकी पुग्यौं। राति १२ बजेको थियो। प्रहरी जान तयार भए। बर्दी र जुत्ता लगाए। चौकीका सई सा’पले जिल्लामा (जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर) मा सोध्नुपर्छ भने। जिल्लाले नजाऊ भनेको छ भन्दै सई सा’पले जान दिएनन्।
प्रहरी मेरो साथी भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ। तर हाम्री छोरी खोज्न त गएनन्। उल्टै प्रमाण नष्ट पारे। हामीले भनेको समयमा प्रहरी गइदिएको भए सायद प्रहरीले मेरी छोरीलाई जीवितै उद्धार गर्न सक्थ्यो कि ?
११ गते फोटोसहित उजुरी लिएर जिल्लामा पुग्यौं। उजुुरी दिएर फर्किंदा बम दिदिबहीनीको घरमा दुई जना जना सादा पोसाक र बर्दीवाला प्रहरी थिए। कहाँबाट आए थाहा भएन। त्यहाँ पनि हामीलाई धम्क्याइयो। प्रहरीको साथ पाएनौं। बबिताले साइकल भेटिएपछि लास पनि उतै भेटिन्छ भनिन्। त्यो उनले कसरी भनिन्। प्रहरीले यतिसम्म गर्‍यो कि मेरी छोरीको सर्टको खल्ती च्यातेर दिलीपसिंह विष्ट (हाल पक्राउ परेर छुटेका)को घरको पछाडि लगेर राखेका रहेछन्। मलाई विष्टले नै मारेको रहेछ भनेर भने। मैले होइन त्यसले भनें। तर विष्टले नै स्विकारिसकेको छ भनेर मलाई जबर्जस्ती किटानी जाहेरी दिन लगाए।
मलाई विष्टको घरमा राखे। उनीहरूले घरपछाडिबाट खोजे जस्तो गरी सर्टको टुक्रा देखाए। पानी परेको ठाउँमा मेरी छोरीको लास भेटिएको थियो। तर सर्टको कपडा सुक्खा र सफा थियो। प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्‍यो। नाटक रच्यो।
एसपीसहित तीनको डीएनए परीक्षण सुरु
प्रहरीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट (हाल निलम्बित)सहित तीनजनाको डीएनए परीक्षण सुरु गरेको छ।
गत साउन १० गते घरबाट हिँडेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मलाको हत्या प्रकरणमा एसएसपी विष्टसहित तीन जना शंकाको दायरामा परेपछि उनीहरूको डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको हो।
हाल निलम्बनमा रहेका एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुषको रगत लिएर एीनए परीक्षण सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए।
निर्मला प्रकरणमा मुछिएका आयुष सुरेन्द्रका भतिजाका साथै कांग्रेस महासमिति सदस्य भूपेन्द्र विष्टका छोरा पनि हुन्। ‘हाल निलम्बनमा रहेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएनए टेस्ट प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’, प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पीडितका आफन्तको प्रश्न सम्बोधन गर्न तत्कालीन एसपी विष्टसहित तीन जनाको डीएनए परीक्षण गराउन विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ।’
निर्मलाका अभिभावक र आफन्तको गुनासो सम्बोधनसँगै अभियुक्त पत्ता लगाउन थप प्रमाण जुटाउन डीएनए परीक्षण थालिएको उनको भनाइ छ। ‘बिहीबारै एसपी विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएनए परीक्षणका लागि रगत झिकेर विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ’, उनले भने, ‘निर्मलाको डीएनएसँग मेल खाएमा छाड्दैनौ, कारबाही गर्छौं।’
यसअघि मुख्य अभियुक्त भनेर २४ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्ट र ११ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका चक्र बडूको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। तर निर्मलासँग ती दुवैको डीएनए नमिलेपछि जनआक्रोश झनै बढेको छ।
यसैबीच एसपी विष्ट र सीआईबीबाट अनुसन्धान टोलीमा खटिएका प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि थप आन्तरिक छानबिनका लागि एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइएको पाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ १४ गते नै सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे पनि बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी क्षेत्रीले बताए। ‘यो छानबिन समिति आकस्मिक होइन, हामीले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, उनले भने।
आमाहरूको घाँस काट्दै गर्दाको कुरा अवस्य पढ्नुहाेला है… केहि सिक्ने अवसर अवस्य पाइन्छ
मनै थमाउन सकिएन #Rip फेरि एकदिन अवस्य भेट्नेछौ बुवा! तपाईं जादा आज आकश नि रोएको छ